‘Aabe wuxuu igu yiri waxaan u soconnaa dhakhtarka ilkaha, balse dib iiguma soo noqon’ | Baahin Media
‘Aabe wuxuu igu yiri waxaan u soconnaa dhakhtarka ilkaha, balse dib iiguma soo noqon’
Ka dib markii ay geeriyootay hooyadeed ayaa Hayley Kemp waxaa uu aabaheed uga tagay xarunta lagu xannaaneeyo carruurta, wuxuuna markii uu halkaa keenayay uu u sheegay in ay aadayaan dhakhtarka ilkaha. Xilligaasi waxay jirtay toddobo sano oo kaliya.
Hayley, oo hadda 55 jir ah, ayaa soo martay caruurnimo dhib badan – mararka qaar waxay qol la seexan jirtay haweeney jirkeeda ka ganacsan jirtay oo maamulka dowladda hoose uu la soo dejiyay. Waxaa sidoo kale la geeyay goob lagu xiro carruurta iyada oo aan geysan wax dambi ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxay xusuustaa wakhtigii ay ku soo qaadatay xaruntaasi xannaanada carruurta ee Plymouth, waxayna sheegtay in xilligaasi ugu ahaa kii ugu farxada badnaa ee soo mara caruurnimadeedii – waxayna sharraxeysaa khibraddii ay ka heshay nolashaasi oo ka caawisay in ay mustaqbal yeelato.
‘Eedadeey ayaa igaraaci jirtay oo cunndada iga celin jirtay’
Shan jir markaan ahaa ayaa hooyaday waxaa ku dhacay kansarka sanbabada.
Waxaan ahaa gabadhii ugu yarayd ee toddobada caruurta ah ee ay waalidkeygu dhaleen. Ka dib markii ay hooyadeen dhimatay aabo ayaa kaligii na hayay in muddo ah.
Ka dib aabbe wuxuu guursaday haweeney la yiraahdo Peggy oo wadatay laba gabdhood oo ay dhashay, isku meel ayaanan wada degnay.
Bale runtii waxay ahayd mid aad u naxariis darran. Iima aysan ogolayn in hal qol isla joogno aniga iyo iyada. Iima aysan ogolayn inaan la hadlo, mar kastana waa ay na garaaci jirtay cuntadana nama siin jirin.
Taa waxaa markhaati ka ah marka aan iskuukla u soconno waxaa na joojin jiray dadka deriska ah oo tinta noo shanleyn jiray isla markaana buskud na siin jiray, marka taa waxay ka dhigan tahay in ay na arki jireen innaga oo ay daruuf naga muuqato.
Sababtu ma aqaan basle anigu ima aysan jeclayn. Sidaa awgeena waxay dalbatay in aan cidda ka tago kadibna aabahay ayaa igeeyay xarunta xannaanada carruurta.
‘Wuxuu iga tagay isagoon imacsalaameyn’
Intii aan baska soo saarnayn ayuu ii sheegay in aan u soconno dhakhtarka ilkaha, mana ogeyn meesha waxa ay tahay meesha uu ikeenay waayo waan yaraa oo toddobo jir oo kaliya ayaan ahaa.
Meesha uu ikeenay waxay iila muuqatay meel qurux badan oo ah dhakhtarka ilkaha.
Laba haween ah ayaa soo baxay waxa ayna xafiis ila galeen aabahayn, anigana waxaa la igu yiri kursigan ku fariiso. Ka dib aabe ayaa ii yimid wuxuuna igu yiri ‘halkan igu sii sug suuliga ayaan aadayaaye’.
Ka dib labadii haweenka ahaa ayaa soo baxay oo waa ay ikaxeeyeen, aabana mar dambe dib iiguma soo noqon. Halkaan ayaan.
Waxaan filayaa in aabahey uu ahaa nin daciif ah, runtii, maxaa yeelay wuxuu cannugiisa uga tagay qof si dhab ahaantii qabay xanuun dhanka maskaxda ah.
‘Waxay ila noqotay in aan dhintay oo aan galay janno ‘
Anigu wax dhar ah ma aanan wadan balse dhar ayay ii keeneen. Waxay ila hayd in aan joogo meel fiican oo aan ku dalxiisayo.
Shaqaalaha dhammaantood waxa ay ii ahaayeen “eedo” iyo “adeer” waxaana halkaasi aan ka helayay cunno iyo ciyaar aad u badan.
Runtii waxaan u maleeyay in aan dhintay oo aan jannaddii galay.
Waxa aadka iisoo jiitay ayaa ahayd in subax kasta oo sabtida ay na kaxeynayaan oo ay na geynayaan goobaha lagu xannaaneeyo xayawaanka iyo sidoo kael shineemo.
Maalmaha Axadda ahina waxaan aadi jirnay Iskuullada Kaniisadaha.
Waxaad mar kastaa ma qashaan in xarumaha lagu xannaaneeyo carruurta ay yihiin meelo aad u xun balse aniga waxaasi wax ka duwan ayaan soo arkay.
Dadku inta badan wax fiican kama sheegaan ablse anigu waxa ay ii ahayd meel aan ku badbaaday oo ammaan ah.
‘Waxaan dhex seexday xabsi’
Waxaan ku jiray xaruntaasi Parklands muddo toddobo ama siddeed bilood ah, ka dibna waxaa xarunta yimid haween doonaya caruur ay korsadaan oo markii dambe mid ka mid ah haweenkaasi ayaa ikaxeysatay oo aan gurigeeda u raacay.
Gurigan cusub wuxuu ila noqday meel ciriiri ah oo waad dareemi kartaa in adiga oo ka soo dhex baday carruur aad u badan lagu geeyo qol kaligaa. Anigu waxaan jeclahay in aad dad badan ku dhex jiro.
Dhawr iyo toban jir markaan gaaray waxaan billaabay in marba aan meel u cararo. Mararka qaar waxaan u tagayaa walaashey ama walaalkey oo mid iyo meel deggan.
Habeennada qaar waxaan u jiif doonanayaa xarunta xannaanada carruurta basle meel aan seexdo iima aysan hayn oo waxaa dhacaysa in habeenba aan meel seexdo.
Inakstoo wax dambi ah aanan geysan markii dambe waxa la igeeyay meel carruurta dambiilayaasha ahi lagu xiro oo ku taal Bristol. Waligey la ima xirin maxkamadna la ima geyn. Waana meeshii ugu xumeyd nolasheyda oo aan soo maro oo waxaan seexanayay xabsi gudihii.
Markii dambe waxa halkaasi iga saaray waaxda arrimaha bulshada oo waxa ay igeeyeen guri kale.
‘Waxaan bartay dhammaan haweenka jirkooga ka ganacsada’
Waxan helay meel aan seexdo iyo qureec balse waxaan sariir la seexanayay haweeney aanan aqoon. Aad ayaan u jeclaa haweeneydaa oo 19 jir ahayd. Anigu xilligaasi 15 jir ayaan ahaa waxa ayna iyada iila muuqatay qof weyn.
Waxay ahayd haweeney jirkeeda ka ganacsato. Waxay isugu yeeri jirtay Judy Teen.
Waxay igu oran jirtay waxaan aadayaa shaqo, mararka qaarna waxay igeyn jirtay baararka lagu caweeyo. Balse waligeed iguma aysan dhiirigelin in aan ku biro gabdhaha jirkooga ka ganacsada.
Mar ayaa waxaa dhacday in nin uu ii hanjabay ka dibna booliska ayaa iga soo gaaray.
Kaddib waaxda arrimaha bulshada ayaa halkaa iga kaxeeyay oo waxay igeeyeen Emma Place. Halkaasi waxaan ku bartay dhammaan haweenka jirkooga ka ganacsada.
Ka dib gabar ayaa dhalay. Hadda waxay jirtaa 37 sano. Markii ay shan jir ahayd ayaa waxaa igu dhacay xanuun dhanka neerfaha ah. Ka dib waxaa la igeeyay xarun ku taal Moorhaven on Dartmoor.
Aniga oo markaa 30 sano jira ayaa waxaan maqlay in aabahay uu doonayo in uu na arko aniga iyo gabadheyda, ka dib waan raadiyay.
Markii aan la kulmay waxaan dareemayay in waxba aysan naga dhaxeyn oo uu yahay qof aanan jeclayn oo wax ixtiraam ah aanan u hayn.
Maadaama uu meel cidla ah iiga tagay aniga oo carruur ah waxaa ii soo baxday in waxba aysan naga dhaxeyn, sidaa awgeed waxaan go’aansaday in mar dambe aanan dib ula kulmin.
Meelo badan ayaan ka soo shaqeeyay waxaana noqday qof u adeegta dadka dhibban ee qaxooti ah.
Waxaan mar la shaqeyn jiray dad qaxooti ah oo ka yimid dalka Uganda. Waxaan u soo uruurin jirnay dhar iyo bustooyin.
Waxay ka soo badbaadeen dhibaatooyin badan oo ay soo mareen, haddana nolal cusub ayay billaabeen.
‘Nasiib darro ayay ahayd in aan soo maro carruurnimada noocaasi ah’
Waxaan hadda la shaqeeyaa dadka qaxootiga ahi, gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee ku yaal dalka Ciraaq.
Anigu wax badan oo carruurta waalidiintooda la soo koray ay haystaan ayaa iga maqan. Balse nolashaasi wax badan ayay ibartay oo hadda dad badan ay wajahayaan.
Arrinteyda waxay dhiirigelin u tahay bdad badan, waxaadna ogaaneysaa in wax kastaa oo xun oo ku soo mara aysan ahayn wax waligood ku haysanaya. Maalin uunbaad ka bixi doontaa.
Waan ka xumahay in aan nolashaasi soo maray balse wax badan baan ka bartay oo aysan jiri lahayn cid kale oo ibari lahayd. Xaqiiqadu waa in adiga aad soo taabatid. Arrintaasi waxay ibartay dulqaad iyo adkeysi iyo hammi. Aad ayaan u nasiib badanahay in aan nolashaasi soo maray.